Global Voices teny Malagasy » Manampy ireo Mpitsikera Mba Ho Salama Sy Ho Mpankatò Ny Toby ‘Fanitsiana Toe-tsaina’ An’ny Miaramila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2016 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Prachatai Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra nasiam-panovana ity dia avy amin'ny Prachatai , vohikalam-baovao tsy miankina ao Thailand, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty-. Hatramin'ny nakàna fahefana an-keriny tamin'ny 2014, mbola manohy mifehy an'i Thailand ny miaramila. Nametraka fanarahamaso hentitra eo amin'ny haino aman-jery izy, voaràra ny fihetsiketseham-bahoaka, nanome fahefana malalaka ho an'ny miaramila ny lalàmpanorenana vonjimaika nankatoaviny. Ireo izay mitsikera ny governemanta tohanan'ny miaramila dia ‘asaina’ miatrika fivoriana fanitsiana toe-tsaina ao amin'ny toby miaramila mandritra ny andro maromaro.
Reraka amin'ny asa sy ny fomba fiaina ratsy? Ny toby fanitsiana toe-tsaina ho vaovao an'ny fitondrana miaramila Thailandey izay natao voalohany indrindra ho an'ny mpitarika mpanohitra sy sivika ao amin'ny firenena dia hitondra anao amin'ny fanarahamaso ny fahasalamana, manitsy anao ho amin'ny fomba fiaina vaovao ara-pahasalamana, ary ambonin'izany rehetra izany, hanampy anao hahatratra ny karazana toe-tsaina mifandray amin'ny paikady fananganam-pirenena an'ny fitondrana miaramila.
Hita ao amin'ny toby miaramila akaiky anao indrindra ny toby.
Manaraka ny “Fandaharam-Pampiofanana Fananganam-pirenena amin'ny endrika Vaovao ho an'ny Mpitarika ” ny toby izay maharitra fito andro maninjitra fara fahakeliny , arakaraka ny fahaizan'ny mpiofana hanitsy azy na ny toe-tsainy.
Ny zavatra atao isan'andro dia ahitana fifohazana amin'ny 5 maraina, mandro, misy fiatoana fohy ho an'ny fotoana fialan-tsasatra, ary miasa amin'ny maraina.
Manatrika valan-dresaka momba ny tanjon'ny fitantanan-draharahan'ny fitondrana miaramila, arahana “fotoana fifanakalozan-kevitra” ireo mpiofana aty aoriana,
Amin'ny hariva, misy ny hetsika fialam-boly mba hampihenana ny rarin-tsaina, ary mandeha matory izy ireo amin'ny 9,30 hariva, hoy i Gen. Piyapong Klinphan, mpitondra tenin'ny fitondrana miaramila sady mpanara-maso ny tetikasa voalazan'ny Sampam-baovao Thailandey.
Rehefa vita ny fiofanana ao amin'ny toby, raha tokony hahazo serfifikà ireo mpiofana, dia tsy maintsy manasonia taratasy fifanekena (MOU) milaza fa hampitsahatra izay hetsika ara-politika rehetra sy hampitsahatra fitarihan'ady .
Ireo izay manitsakitsaka ny MOU dia mety asaina hanatrika ny fiofanana indray.
Nilaza i Gen. Piyapong fa ny olona mety asaina ao amin'ny toby dia ahitana ireo mitsikera ny fitondrana miaramila eo amin'ny sehatra fiadian-kevitra imasom-bahoaka sy ny media sosialy sy izay mety ho hita fa fandrahonana ny fiarovam-pirenena.
Nilaza koa izy fa manara-maso ny vondrona mpikatroka ny fitondrana miaramila ary mandinika raha hasaina handray anjara amin'ny fiofanana izy ireo na tsia.
Hatao ny fanarahamaso ara-pahasalamana mba hampisehoana ny vahoaka fa karakaraina tsara ao amin'ny toby miaramila ireo mpiofana, fa tsy voadaroka na nampijaliana araka ny tian'ny haino aman-jery taterina.
Nilaza ihany koa ny jeneraly fa ny fandaharam-potoana dia ezaka hananganana fifankahazoana amin'ny mpanohitra, izay hanampy ny firenena “hiampita” amin'ny “hoavy mamiratra”. Manantena ny fitondrana miaramila, na izany aza, fa tsy misy hisy olona intsony hanatrika ny fiofanana.
Mitsikera ny fiofanana ny mpanao politika mpanohitra
Tamin'ny Alarobia 7Aprily, nandefa  lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Fiofanana Fanasana Atidoha Mpanao politika’ tao amin'ny pejiny Facebook ilay mpanao politika indroa nentina nanatrika fiofanana fanitsiana toe-tsaina tamin'ny volana lasa, Watana Muangsook, Thailandey Pheu (antoko politikan’ ny Praiminisitra Thaksin Shinawatravo voahongana).
Nilaza i Watana fa natao hanampenam-bava izay feo manohitra ny fitsapan-kevibahoaka sy ny volavolan-dalàmpanorenana ny fiofanana. Mihevitra ny mpitsikera sasany fa ny volavolan-dalàmpanorenana dia mety hanamafy ny fitondran'ny miaramila ao amin'ny firenena. Manainga ny fitondrana miaramila i Watana mba hatoky ny fahamatoran'ny vahoaka sy hamela azy ireo hanana fifanakalozan-kevitra ara-politika malalaka.
Tena zava-dehibe amin'ny hoavin'ny firenena ny satan'ny fitsapan-kevibahoaka atsy ho atsy. Fomba tokana hiantohana ny kalitaon'ny fitsapakevi-bahoaka sy ny fankasitrahana avy amin'ny olona ny famelana ny vahoaka hiadihevitra malalaka momba ny votoatin'ny ny volavolan-dalàmpanorenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/15/81258/
 voalazan'ny : http://www.tnamcot.com/content/442410
 mitsikera : https://advox.globalvoices.org/2015/09/15/veteran-thai-journalist-detained-after-attitude-adjustment/